Degso Zemana Antivirus APK loogu talagalay Android
Degso Zemana Antivirus
Bilaash Degso loogu talagalay Android
Degso Zemana Antivirus,
Zemana Antivirus waa codsi antivirus horumarsan oo loogu talagalay dadka isticmaala taleefanka Android. Waxaad ku soo dejisan kartaa nuqulkii ugu dambeeyay ee Zemana Antivirus 2021, xannibaadda basaasnimada iyo codsiga amniga internetka, taleefankaaga casriga ah adoo adeegsanaya Softmedal, waxaadna ka ilaalin kartaa aaladdaada moobilka waqtiga dhabta ah ka hortagga furin, fayrasyada, keyloggers-ka, trojans iyo hanjabaadaha kale ee internetka. Haddii aad ka rakibayso barnaamijyada Android iyo ciyaaraha Google Play ama bogagga soo dejinta APK, Zemana Antivirus, barnaamijka amniga ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee aaladaha Android, waa inuu ku jiraa taleefankaaga.
Soo dejiso Zemana Antivirus
Zemana Antivirus, oo leh interface aad u fudud oo casri ah oo ay si fudud u isticmaali karaan isticmaaleyaasha taleefanka cusub ee Android, waa codsi ka hortag ah oo uu tijaabiyey oo oggolaaday AVTEST, lambarka 1 ee hayadda baarista fayraska, oo waad soo dejisan kartaa oo u adeegsan kartaa bilaash ah. In kasta oo ay bilaash tahay, dalabka Android, oo soo jiita dareenka leh 5 jeer si dhakhso leh iskaanka, ka saarista adware, xannibaadda furin iyo websaydhada, ogaanshaha keyloggers -ka iyo qaar kaloo badan, ayaa la socda taageero luqadda Turkiga.
Tilmaanta Ilaalinta Webka: Waxay kaa ilaalineysaa websaydhada xaasidnimada ah.
Ilaalinta Waqtiga-dhabta ah: Si otomaatig ah u baadhaa barnaamijyada cusub ee la rakibay. Uma baahnid inaad bilowdo iskaanka gacanta. Taleefankaaga Android waxaa laga ilaaliyaa 24/7 fayraska, furin, trojans, spyware, adware, keyloggers iyo khataraha kale ee amniga.
Cusboonaysiinta Xogta Database -ka: Waxay ku haysaa taleefankaaga Android mid la mid ah keydka halista ee la cusbooneysiiyay si looga ilaaliyo khataraha amniga ee ugu dambeeyay.
Ka-hortagga Keylogger-ka: Wuxuu ogaadaa oo xannibaa barnaamijyada kumbuyuutarka ee xun, maamulayaasha furaha, iyo barnaamijyada SMS ee xaasidnimada ah oo la socon kara wax kasta oo aad qorto.
24/7 Taageero Farsamo: Ha welwelin. Haddii aad la kulanto hanjabaad aadan ka saari karin, kooxda Zemana waxay ku xirnaan doontaa aaladdaada Android waxayna gacanta ka saari doontaa furin.
Nadiifiyaha Antivirus: Wuxuu aaladdaada Android ka ilaaliyaa fayrasyo ​​leh Scanner -ka cusub ee cusub.
Zemana Antivirus iyo Security waxaa lagu soo dejisan karaa bilaash. Sameynta baarista antivirus ee ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan taleefannada Android, Zemana Antivirus waxay kaloo bixisaa ikhtiyaar qaali ah oo leh astaamo dheeri ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha doonaya badbaadin heer sare ah.
Zemana Antivirus Noocyada
Horumar: Zemana Ltd.